Waa maxay xiriirka ka dhexeeya is casilaada Zinedine Zidane iyo u dhaqaaqista Sadio Mané ee kooxda Real Madrid? – Gool FM
(Real Madrid) 04 Juunyo 2018. Wargeyska “France Football” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wararka ku aadan in xidiga xulka qaranka Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané uu ku biiri lahaa suuqa xagaaga kooxda Real Madrid.
France Football ayaa waxay sheegtay in Real Madrid ay kala heshiisay Liverpool saxiixa Sadio Mané suuqa xagaaga, taasoo noqon lahayd layaabka ugu weyn ee madaxweynaha kooxda Los Blancos Florentino Perez uu ka sameyn lahaa suuqa xagaaga, kahor inta uusan raacdo u galin saxiixyada Harry Kane iyo Eden Hazard.
Laakiin haatan kadib markii uu si lama filaan ah uu isaga casilay Zinedine Zidane shaqada kooxda Real Madrid, waxaa shaki la galinayaa in heshiiska uu dhici karo.
Wax walba waxay haatan ku xirnaan doonaan macalinka noqon kara badalka Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid, hadii uu doonayo in la dhameystiro heshiiska uu Sadio Mané ku iman karo Santiago Bernabeu iyo hadii kale.